नेपाल – Page 56 – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
चार हात, दुई टाउको भएको अनौठो शिशुको जन्म
धरान । धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक महिलाले अनौठो शिशु जन्माएकी छन्। इनरुवा नगरपालिका ८ की सोनम मण्डलले अनौठो शिशु जन्माएकी हुन्। शिशुको पेट र छाती टाँसिएको छ। चार हात, दुइ टाउको, दुइ खुट्टा र एउटै यौनाङ छ। उनी मंगलबार स्त्री..
फेवाताल किनारमा १९ औँ सडक महोत्सव शुरु
पोखरा। अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१८ आगमनको पूर्वसन्ध्यामा रेस्टुराँ एण्ड बार एसोसिएसन (रेवान) पोखराको आयोजनामा फेवाताल किनारमा १९औँ पोखरा सडक महोत्सव आजदेखि शुरु भएको छ। ‘सडकमै खाऔँ, सडकमै नाचौँ र सडकमै रमाऔँ’भन्ने नाराका साथ शुरु हुने उक्त महोत्सव पोखराको..
कार्यसम्पादन समितिमा छलफल पछि मात्रै कांग्रेस केन्द्रीय समितिको वैठक
काठमाडौं। नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको वैठक शुक्रवार बस्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापित शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन परिणाम र वर्तमान राजनीतिक गतिरोधबारे छलफल गर्न काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएका..
एमालेबाट समानुपातिक प्रदेशसभा सांसदको सूचीमा को–को परे ? (नामावलीसहित)
काठमाडौं । प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावबाट सबै भन्दा ठूलो द लबनेको एमालेले सात वटै प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सदस्य छनोट गरेको छ । विहिबार पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बठकले ७५ प्रदेशसभा सदस्यको सूची..
स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार: डा. उपेन्द्र देवकोटा
लन्डन - लन्डनको किङ्ग्स कलेज हस्पिटल, ब्रिक्टनमा उपचार्थ भर्ना भएका पूर्वमन्त्री तथा वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। नेपालमा नियमित चेकअपका बेला जन्डिस देखिएपछि अकस्मात अस्पताल भर्ना भएका डा. देवकोटाले..
नारायणगढ मुग्लिन सडक रातको समयमा ६ घण्टा वन्द हुने
चितवन । निर्माणधिन नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डलाई रातको समयमा वन्द गरिने भएको छ । कामको गतिलाई बढाउन भन्दै पुस १८ गतेदेखि राति १० बजेबाट विहान ४ बजेसम्म सडकखण्ड वन्द गर्न लागिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बसेको आयोजना प्रमुख र ठेकेदारसहित..
मेयर-उपमेयर झगडाले रोकियो, रानीपोखरीको पुनःनिर्माण
काठमाडौँ । आपसी विवादपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले रानीपोखरी पुनःनिर्माणको काम मंगलबारदेखि अघि बढाउन सकेको छैन । विवादको बिषयमा थप छलफल भइ सहमति भएपछि मात्र काम अघि बढाइने निर्माणका लागि जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी वल्र्डवाइड कँडेल केएन केजीजेभीका..
एमालेमा जाँदै जान्न, बरु नयाँ पार्टी खोल्छु : गोपाल किरांती
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका विवादास्पद नेता गोपाल किरातीले वाम एकताप्रति असहमति जनाउँदै तत्काल पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य किरातीले छुट्टै ‘आठौं महाधिवेशन समुह’ गठन गरेर एमाले जस्तो..
अध्यक्ष छोड्न ओली तयार, सहअध्यक्ष भएपनि दाहाललाई चल्ने
काठमान्डौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ९ पुष बिहान चितवनको भरतपुरमा आफ्नो स्वागतमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी एकताका विषयमा देखिएका अप्ठेराबारे पनि बोले। ‘पार्टी एकतामा अवश्य पनि केही जटिलता छन्, त्यसबारे हामीले सोचिसकेका..
मोरङमा एक बर्ष यता ४३ जना बालिका बलात्कृत
विराटनगर, १२ पुस । पछिल्लो समय बलात्कारका घटनाहरु दिनानुदिन बढदै गएको तथ्याङकले देखाएको छ । तथ्याङले देखाए अनुसार अधिकांश बालिकाहरु बलात्कारको सिकार हुन पुगेको देखाएको छ । मोरङ जिल्लामा मात्र गएको एक बर्ष यता ४३ जना बालिका बलात्कृत भएको तथ्याङ..